ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်း (အင်္ဂလိပ်: Democratisation)သည် ပို၍ကောင်းသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်မှုစံနစ်တစ်ခု သို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်း သည် အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်တစ်ခုမှပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းခြင်း၊အာဏာရှင်နိုင်ငံရေးစံနစ်တစ်ခုမှ ဒီမိုကရေစီတစ်ပိုင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်း၊သို့မဟုတ်အာဏာရှင်တစ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးစံနစ်တစ်ခု မှ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစံနစ် တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထွက်ပေါ်လာမှုသည် စုစည်းခိုင်မာစေသည်။ (ဥပမာ အင်္ဂလန်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အဖြစ်) သို့မဟုတ် ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်းသည် မကြာခဏနောက်ပြန်လည်သွားခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ (ဥပမာ အာဂျင်တီးနားတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အဖြစ်) ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်း၏ ကွဲပြားနေသောပုံစံများသည် နိုင်ငံတစ်ခုသည် စစ်ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး တိုးတက် နိုင် မတိုးတက်နိုင် ကဲ့သို့သော အခြားသောနိုင်ငံရေးသွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ရှင်းလင်းပြရန်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုသည်။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖြစ်စေခြင်း ကိုယ်တိုင် ကို စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သမိုင်းနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း တို့အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များမှ လွှမ်းမိုးထားသည်။
မဲပေးခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖြစ်စေ ခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများပြင်ဆင်
အစိုးရစံနစ် လေး အချိုးပြကိန်းအပေါ် အဆင့် ၈ သို့မဟုတ် ၈နှင့်အထက် အမှတ်ရထားသည့်နိုင်ငံများ အရေအတွက် ၁၈၀ဝ –၂၀ဝ၃
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလွတ်လပ်ခြင်း ၁၉၇၂-၂၀ဝ၅ နိုင်ငံအလိုက်အဆင့်ပြင်ဆင်
ဤမျဉ်းကြောင်းပြပုံသည် နိုင်ငံများကိုအပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် စာရင်းကောက်ယူ သည့်နှစ်အတိုင်း ပြထားသည်။ ၁၉၇၂ – ၂၀ဝ၅
ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်းကို ထိခိုက်စေခြင်း သို့မဟုတ် အဆုံးစွန်ထိကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအချက်များ အကြောင်း အရေးပါသောစကားအခြေအတင် ပြောဆိုမှုများရှိသည်။ စီးပွားရေးများ ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းအပါအဝင် ကြီးမားများဟြးသော ကိစ္စရပ်များတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သက်ရောက်မှုအဖြစ် ရည်ညွှန်းဟြေဆိုမှုများလည်းရှိသည်။ မကြာခဏဆိုသလို ဖော်ပြပြောဆိုသည့် အကြောင်းအချက်များ အချို့မှာ-
ဓန။ တစ်မျိုးသားလုံးထုတ်လုပ်မှု/တစ်ဦးချင်းထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီနှင့်အချိုးတူခြင်းနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံချမ်းသာဆုံးသော ဒီမိုကရေစီများသည် အာကာရှင်စံနစ်အတွင်းသို့
သက်ဆင်းရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ စက်မှုတော်လှန်ရေးမတိုင်မှီက ဒီမိုကရေစီသည်အလွန်ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ခဲ့သည် ကိုလည်းယေဘူယျအားဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြုသောသုတေသနတွင် ဤနည်းဖြင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းခြင်းတစ်ခုအတွက်အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာစေခြင်း (ခေတ်မှီစေရေးသဘောတရား) သို့မဟုတ် အသစ်တည်ဆောက်သည့်ဒီမိုကရေစီများကိုခိုင်မာစေရန် ကူညီခြင်းတို့ကိုအများယုံကြည်မှုရရှိစေရန်ဦးဆောင်ခေါ်ယူသွားသည်။ ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သူများ အချို့သည် ထိုနည်းတူစွာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများဖြင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်းကို မလွဲမသွေရရှိလာလိမ့်မည် ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဒီမိုကရေစီသည် ဥစ္စာဓန၏အကျိုးဆက်လား၊ သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလား သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးစလုံးတိုးတက်မှုများသည် ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလား ဆိုသည့်အငြင်းအခုံသည် အဆုံးသတ်ရန်ဝေးကွာနေဦး မည်ဖြစ်သည်။ ဥစ္စာဓနသည်လည်း ပညာရေးနှင့် အချိုးကျဆက်စပ်နေသည်ဆိုသော်လည်း၊ သူတို့၏ဒီမိုကရေစီ ခိုင်မာမှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် အမှီအခိုကင်းလိမ့် မည်ဟုထင်မြင်ရသည်။ ပညာ ပို၍တတ်သည့် လူများ သည် ပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီး၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားသည့် တန်ဘိုးများကို မျှဝေခံစားရန်ဆန္ဒရှိကြသည်။ အခြားတစ်ဘက်တွင်၊ ပညာရေးအားနည်းပြီး စာမတတ်သည့် လူထုသည် အသံကောင်းဟစ်နိုင်ငံရေးသမားများကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် ရွေးချယ်ခံရပြီးသည်နှင့် ဒီမိုကရေစီကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး၊ လွတ်လပ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲ များရှိနေခဲ့လျင့် ကစား အာဏာရှင်များဖြစ်လာသည်။
အရင်းအမြစ်ကျိန်စာသဘောတရား။ အကြုံပြုထားသည်မှာ ရေနံကဲ့သို့သော အလျှံပယ်ကြွယ်ဝသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှရရှိလာသော ဥစ္စာဓနတစ်ခုတည်း အရင်းခံ နိုင်ငံများသည်ရံဖန်ရံခါ ဒီမို ကရေစီနည်းကျဖြစ်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကြွယ်ဝချမ်းသာသည့် အထက်တန်းစားလူများသည် လူ့အကြိုက် ထောက်ပံ့မှုအပေါ်တွင်ထက် အရင်းအမြစ်ကို တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်တွင် ပိုမို၍မှီခိုနေသည်။ အခြားတစ်ဘက်တွင် မြေ သို့မဟုတ် ရေနံတွင်ထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းအနှီးတွင်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူ လူ့အပါ်လွှာများသည် သူတို့၏ မြှုပ်နှံထားမှုများကို တော်လှန်ရေးကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် အလွယ်တကူ ပျက်စီးသွားမည်ကို ကြောက်လန့်နေကြသည်။ အကျိုးအဆက်အနေဖြင့်၊ သူတို့သည် အတိုက်အခံများနှင့် အပြင်းအထန်စကားများ ရန်ဖြစ်ရမည့်အန္တရာယ်ထက် ဝန်ခံချက်များနှင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ လုပ်ပေးရုံမျှသာရှိသည်။
အရင်းရှင်ဝါဒ။ အချို့က ဒီမိုကရေစီနှင့် အရင်းရှင်ဝါဒသည် ဖွားဘက်တော်များဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။ ဤယုံကြည်မှုမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် အရင်းရှင်ဝါဒတို့သည် ရိုးရှင်းသည့် လွတ်လပ်ခွင့်၏ မတူညီသော အသွင်အပြင် နှစ်ခုဟူသည့် အတွေးအခေါ်ပေါ်တွင် ယေဘူယျအားဖြင့် ဗဟိုပြုထားသည်။ ကျယ်ပြန့်နေသည့် အရှင်းရှင်ဈေးကွက် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုသည် တစ်သီးပုဂ္ဂလဝါဒ၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများ၊ နှစ်ဘက် အလျှော့ပေးဖြေရှင်းခြင်း၊ ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းနှင့် ဥပဒေ၏အရှေ့တွင် အညီအမျှဖြစ်ခြင်း ကဲ့သို့သောစံများကို အားပေးထားသည်။ ထိုအရာများကိုဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖြစ်စေခြင်းအတွက် အထောက်အကူအဖြစ် ရှုမြင်ထားကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်၊ များစွာသော မတ်စ်ဝါဒီ များ ပြောဆိုကြသည်မှာ အရင်းရှင်စံနစ်သည် ထာဝရတည်ရှိနေမှုတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းမကျဘဲ၊ တကယ့်အမှန် ဒီမိုကရေစီသည် စီးပွားရေးကို ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းများထက် လူထုတစ်ရပ်လုံးက ထိမ်းချုပ်ထားမှသာလျှင် တစ်ခုတည်းသော အောင်မြင်နိုင်မှုဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။
လူမှုရေးညီမျှမှု။ အေ့စ်မို့ဂလူ (Acemoglu)နှင့် ရော်ဘင်ဆန်(Robinson) တို့ ညွှန်ပြပြောဆိုထားသည်မှာ လူမှုရေးညီမျှမှု နှင့် ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးတို့အကြားရှိ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေမှုသည် မျဉ်းတပြေးတည်းမရှိပါ။ လူထုသည် လူအားလုံးညီမျှမှု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု(စင်ကာပူ)အတွင်းတွင် တော်လှန်ရန် တက်ကြွမှု နည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေသည် နိမ့်ကျနေသည်။ မညီမျှမှု မြင့်မားသည့်အဖွဲ့အစည်း (အသားအရောင် ခွဲခြားမှုအောက်ရှိ တောင်အာဖရိက ရှိ ဒီမိုကရေစီတစ်ခုတွင် ဥစ္စာဓနနှင့် အာဏာပြန်လည်ခွဲဝေပေးမှုသည် အထက်တန်းလွှာများကို များစွာထိခိုက်နိုင်သဖြင့်၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် လုပ်နိုင်သမျှအားလုံး လုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်းသည် အလယ်အလတ်နိုင်ငံများတွင် ထွက်ပေါ်လာရန် ပို၍အလားအလာ ရှိသည်။ ထိုနိုင်ငံများ၏အထက်တန်းလွှာများသည် လျှော့ပေါ့အခွင့်အရေး များကမ်းလှမ်းကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် (၁) သူတို့သည်တော်လှန်ရေးတစ်ခု၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို သုံးသပ်မိသည်ဟု ယုံကြည်ရသည် (၂) လျှော့ပေါ့အခွင့်အရေးများ၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် အများကြီးမဟုတ်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤမျှော်လင့်ချက်များသည် အတွေ့အကြုံ အခြေပြုသုတေသန ဖော်ပြချက်နှင့် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေပြီး၊ ထိုဒီမိုကရေစီသည် လူအားလုံးညီမျှမှု အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပိုမို၍တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
အလယ်အလွှာ။ အချို့သောစံနမူနာများအရ၊ ကြားအဆင့်ဥစ္စာဓနရှိသည့် နိုင်ငံသားများ၏ အမှန်တစ်ကယ်အရေးပါသော လူတန်းစားအလွှာကြီးတည်ရှိနေမှုသည် တည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေသည့် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို သက်ရောက်စေနိုင်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီကို အလွန်အမင်း တိုးတက်ထွန်းကားရန် ခွင့်ပြုပေးသည်။ ဤကိစ္စကို အမြဲလိုလိုပြောကြား ရှင်းပြနေသည်မှာ အထက်တန်းအလွှာများသည် သူတို့၏နေရာများကို တာရှည်အောင်ထိမ်းသိမ်ထားနိုင်ရန် နိုင်ငံရေးအာဏာကို လိုချင်နေသည့်အချိန်တွင် နှင့် အောက်ဆုံးအလွှာများသည် သူတို့၏ဘဝများကို အထက်သို့မြှင့်တင်လိုသည့်အခါများ တွင် အလယ်လူတန်းစားအလွှာသည် ထိုအစွန်းနှစ်ဘက်များကို ချိန်ခွင်လျှာညှိပေးရသည်။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ။ အားကောင်းသည် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ( အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ သမဂ္ဂများ၊ ပညာရှင်အဖွဲ့များ၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ)အား ဒီမိုကရေစီနည်းဖြစ်ခြင်း အတွက် အရေးပါမှုဖြစ်စေရန် အချို့သော သဘောတရားပညာရှင်များမှ စဉ်းစားသုံးသပ်ကြသည်မှာ၊ သူတို့သည် လူထုအားစည်းရုံးခြင်းနှင့် အများသဘောတူမည့်ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုပေးအပ်ပြီး၊ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုမှ တစ်ဆင့်စည်းရုံးစေခြင်းဖြင့်၊ နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆင့်၏ အာဏာကို စိမ်ခေါ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားအသင်းအဖွဲ့များတွင် ပတ်သက်ပါဝင်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်မှုစံနစ် တခုတွင် သူတို့၏ရှေ့လာမည့် နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုအတွက် နိုင်ငံသားများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်
ပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ရေပြင်ညီဖွဲ့စည်းထားသည့်လူမှုကွန်ရက်များသည် လူထုထဲတွင် ယုံကြည်မှုရလာစေရန် တည်ဆောက်ရမည်။ ယုံကြည်မှုသည် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှု ။ နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုပြန် လည်လာခြင်း၊ ဂယ်ဘရီယယ်အေ အယ်လမွန် (Gabriel A. Almond )နှင့် ဆစ်ဒနီဗာဘာ (Sidney Verba) (အယ်ဒီတာများ) သည် နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှု၏ ဆက်စပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များမှာ သတ်မှတထားသော နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုသည် ဒီမိုကရေစီအသက်ရှင် နေထိုင်ရေးအတွကလိုအပ်သည်။ ဤလေ့လာမှုသည် သမရိုးကျတွေးခေါ်မှုကို စိမ်ခေါ်နေသည် မှာယဉ်ကျေးမှုများသည် ၎င်းတို့၏ သူမတူခြင်းနှင့် အလေ့အကျင့်များ ကို ရေရှည်ထိမ်းသိမ်း ထားနိုင်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီကို တည်မြဲနေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ယဉ်ကျေးမှု။ သေချာသည့် ယဉ်ကျေးမှုများသည် အခြားသောအရာများထက် ဒီမိုကရေစီ၏တန်ဘိုးများကို လွယ်ကူစွာ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု အခြားသောသူများမှ ပြောဆိုကြသည်။ ဤအမြင်သည် မျိုးနွယ်စုဗဟိုပြုမှုကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။ စရိုက်လက္ခဏာတွင် အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု ပုံသဏ္ဌာန်သည် ဒီမိုကရေစ အတွက် “အကိုက်ညီဆုံး” အဖြစ်ကိုးကားရည်ညွှန်းကြသည်။ အခြားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်မူ ဒီမိုကရေစီ၏ အခက်အခဲ သို့မဟုတ် မလိုလားမှုကိုဖြစ်စေသည့် တန်ဘိုးများပါရှိနေသကဲ့သို့ ပုံဖေါ်ထားကြသည်။ ဤငြင်းဆိုချက်သည် ဒီမိုကရေစီမကျသည် အုပ်ချုပ်ရေး စံနစ်များမှ ဒီမိုကရေစီပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မအောင်မြင်မှုများကို သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးပြုကြသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့၌များစွာသော အနောက်တိုင်းပုံစံမဟုတ်သည့် ဒီမိုကရေစီများရှိနှင့်နေပြီးဖြစ်သည်။ ဥပများတွင် အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ နမီးဘီးယား၊ ဘော့စဝါနာ၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် တောင်ကိုရီးယားတို့ ပါဝင်ကြသည်။
လူ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးအပ်ခြင်း နှင့် အချုပ်အချယ်မှလွတ်ကင်းသော တန်ဘိုးများ။ ခေတ်မှီစေရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲနှင့်ဒီမိုကရေစီ၊ ရော်နယ်အင်းဂဲဟတ် နှင့် ခရစ်ဂန်ဝယ်ဇယ် တို့မှ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖြစ်စေခြင်းသည် လူသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြစ်သည့် ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု၏ ရလဒ်အနေဖြင့် သာမန်လူများကို အအစဉ်အလိုက် အဆင့် သုံးဆင့်ဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးအပ်ထားသည်ဟု ရှင်းပြထားသည်။ ခေတ်မှီစေရေးသည် ပထမဦးစွာ များပြားသည့်အရင်းအမြစ်များကို လူထု၏လက်ဝယ်သို့ပေးအပ်ပြီး၊ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းမှ စွမ်းဆောင်နိုင်သည့် အသိဉာဏ်ကို အားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေရန် လူထုအားလုပ ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ချုပ်ချယ်မှုမှ လွတ်မြောက်ရသည့် တန်ဖိုးများကို မြှင့်တင်ပေးရာရောက်ပြီး၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်နိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများတန်းတူညီမျှမှု ဖြစ်စေရေးကို အလေးထားဂရုစိုက်သည်။ ထိုတန်ဘိုးများသည် လွတ်လပ်ခွင့်အလေ့ကျင့်ဖြစ်စေမည့် စိတ်ဆန္ဒကိုပေးရာတွင်လူထု၏တက်ကြွလှုပ်ရှားသောအသိဉာဏ်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အချုပ်အချယ်များမှ လွတ်ကင်းသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီအသစ်များ ထွက်ပေါ်လာစေရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီ အဟောင်းများ ရေရှည်တည်တံ့စေရန် နှစ်ခုစလုံးအတွက် အတောင့ တင်းဆုံးသော အချက်ဖြစ်သည်ကိုပြဆိုထားသည်။ သီးသန့်အနေဖြင့် ၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေ ခြင်းအပေါ်ခေတ်မှီစေရေးနှင့် အခြားသောပါဝင်သည့်အချက်များ၏ အကျိုးသက ရောက်မှုများသည် ချုပ်ချယ်မှုမှလွတ်ကင်းရသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် မြှင့်တင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ချန်ဆွဲထားခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည့်အချက်များနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးသည်။နောက်ထပ် ထောက်ပြအကြံပြုထားသည်မှာ အချုပ်အချယ်မှ လွတ်ကင်းရသည့် အကျိုးကျေးဇူးများအား လူထုအား ပေးခဲ့လျှင် ဒီမိုကရေစီ ရေရှည်တည်တံ့တိုးတက်စေရန် လုပ်မည် သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခဲ့လျှင် ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရန် လုပ်မည်ဆိုသည့် ဒီမိုကရေစီအောင်မြင်မှုများရရှိစေမည့် မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် အထက်တန်းလွှာများ၏အားစမ်းမှုများတွင် ပါဝင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးထားသည်။
တစ်သားတည်းဖြစ်နေသည့်လူထု။ နိုင်ငံတစ်ခုသည် မျိုးနွယ်စုအဖွဲ့များ ၊ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ဘာသာစကားဖြင့်နက်ရှိုင်းစွာပိုင်းခြားထားခဲ့လျှင်၊ ဒီမိုကရေစီ တစ်ခုထူထောင်ရန်ခဲယဉ်းမှုရှိမည်ဟု အချို့မှ ယုံကြည်ကြသည်။ ဤသဘောတရား ၏ အခြေခံသည် နိုင်ငံတစ်ခု၏ ကွဲပြားနေသော ပါဝင်မှုများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အာဏာကိုမျှဝေကြမည်ဆိုသည်ထက်မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထားများကို ရှေ့တန်းတင် ထားခြင်းတွင် ပို၍စိတ်ဝင်စားပေးလိမ့်မည်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် အထင်ကရ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အိန္ဒိယ၏ ကြီးမားသောလူမျိုး ဘာသာကွဲပြားမှုရှိနေခဲ့သော်လည်း၊ ဒီမိုကရေစီပင်ဖြစ်နေသည်။
ဒီမိုကရေစီနှင့်ယခင်အတွေ့အကြုံ။ အချို့သော သဘောတရားဆရာများအဆိုအရ၊ နိုင်ငံတစ်ခု၏အတိတ်ကာလတွင် ဒီမိုကရေစီရှိခဲ့သည် သို့မဟုတ် မရှိခဲ့ပါဆိုသည်မှာ ၎င်း၏ဒီမိုကရေစီနှင့် နှောင်းပိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအပေါ် ထင်ရှားသည့်အကျိုးသက် ရောက်မှုတစ်ခု ရှိနိုင်သည်။ အရင်ကထဲမှ ဒီမိုကရေစီနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသည့် နိုင်ငံတ စ်ခုတွင် ဒီမိုကရေစီကို ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်မှာ အလွန်ပင်ခက်ခဲသည် (သို့မဟုတ် ထိုနည်းတူစွာဘဲ မဖြစ်နိုငပါ)ဟု အချို့မှ ထောက်ပြထားကြသည်။ ထိုကဲသို့ပြုလုပ်ရမည့်အစား၊ ဒီမိုကရေစီသည် တစ်ဖြေးဖြေးချင်းဖြစ်ပေါ် လာမည်ဟုပြောဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့်အတိတ်မှ အတွေ့အကြုံများရှိသည့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကဲ့သို့သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်းသည် အမှန်တကယ် ဆိုးရွားသွားစေနိုင်သည်။ ထိုအထဲတွင် ယခင်ကထက ကျဆုံးခဲ့ရသည့် ဒီမိုကရေစီသည် ဆန္ဒအားနည်းပါးခြင်း သို့မဟုတ် လာလမ်းအတိုင်းပြန်ဆင်းသွားစေနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အခြားသောသူများ မှ ပြောဆိုကြသည်။
နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှု ။ နိုင်ငံခြားမှ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းသည် ၎င်း၏ အောင်မြင်မှုနှင့်ကျဆုံးမှုတွင် အရေးကြီးအချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု အချို့မှယုံကြည်ကြသည်။ အချို့အတွက် နိုင်ငံခြားမှ ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် ဒီမိုကရေစီအတွက် အကောင်းဖြစ်သည် – ဒီမိုကရေစီထူထောင်ထားရှိပြီးဖြစ်သည့် နိုင်ငံများမှ လွယ်လင့်တကူ မြှင့်တင်မွေးစားခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီရရှိနိုင်ပြီး၊ ထိုဒီမိုကရေစီကိုအခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် မရရှိနိုင်ဟု အချို့နိုင်ငံများမှ ယုံကြည် ကြသည်။ သို့ရာတွင်အချို့သောသူများသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးဖြင့်အဆန်းထွင်ပြီး ပြောဆို ကြသည်မှာ ဒီမိုကရေစီသည် “အောက်ခြေမှအပေါ်သို့” တက်လာရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ အပြင်ဘက်မှ ဒီမိုကရေစီ ရယူခြင်းသည် ရံဖန်ရံခါကျဆုံးမှုနှင့် နိဂုံးချုပ်စေသည်ဟု ဖြစ်သည်။ အများဆုံးသော အစွန်းရောက်ပုံစံသည် စစ်တပ်မှ
ဝင်ရောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ ရှေ့နေလိုက်သူများ ထောက်ပြနေသည့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး ဂျပန်နှင့် ဂျာမနီတွင် (အငြင်းပွားသည်) တည်ငြိမ်သည့် ဒီမိုကရေစီများ ဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝေဖန်သူများမှ ဥပမာအဖြစ်ထောက် ပြနေသည်မှာ ကိုလိုနီစံနစ်ကျဆုံးခြင်းများ နှင့် ကိုလိုနီလုပ်မှုလျော့နည်းလာပြီး၊ အများဆုံးသောဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် တည်ငြိမ်သည့်ဒီမိုကရေစီများ ဖန်တီးရန် အချိန်တွင် ထိုနိုင်ငံများ၌ အာဏာရှင်များသည် လွတ်လပ်ရေးရအပြီး၊ ခဏတာဒီမိုကရေစီကာလနောက်ပိုင်းတွင် ရံဖန်ရံခါ အလျှင်အမြန်အာဏာရယူကြသည်။
အသက်အပိုင်းအခြား။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သည့် လူများအများအပြားရှိနေသည့် နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီတစ်ကြိမ်စဖြစ်လာသည်နှင့် ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းရန် ပို၍ စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ထင်မြင် ရသည်ကို နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆောင်းပါးတွင် ပါရှိသော ရစ်ချတ် ကွန်ကွတ် (Richard P. Concotta) မှ လက်ဆင့်ကမ်းထားသည့် စာတန်းအဆိုအရ တွေ့ရှိရသည်။ ငယ်ရွယ်သူလူဦးရေ ( အသက်၂၉ နှစ် နှင့် အောက် ဖြစ်သည်) သည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်လျော့နည်းနေလျှင်၊ ဤသုတေသန၏အဆိုအရ ဒီမိုကရေစီတစ်ခုသည် ပိုမိုစိတ်ချရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Przeworski, Adam (2000). Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press။
↑ Rice, Tom W. (2002-12-01). "Democracy, Economic Wealth and Social Capital: Sorting Out the Causal Connections". Space and Polity6(3): 307–325. doi:10.1080/1356257022000031995. ISSN 1356-2576.
↑ "Income and the stability of democracy: Pushing beyond the borders of logic to explainastrong correlation?" (2014). Constitutional Political Economy 26: 121–136. doi:10.1007/s10602-014-9175-x.
↑ Acemoglu, Daron (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press။
↑ "Who Democratizes? Western-educated Leaders and Regime Transitions" (2015). Journal of Conflict Resolution. doi:10.1177/0022002715590878.
↑ Therborn, Göran (1977). "The rule of capital and the rise of democracy: Capital and suffrage (cover title)". New Left Review 103 (The advent of bourgeois democracy): 3–41.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖြစ်စေခြင်း&oldid=419993" မှ ရယူရန်
၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၀၄:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၀၄:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။